MYSTERY ZILLION'S MEMBER GATHERING (Kan Daw Gyi) - MYSTERY ZILLION
MYSTERY ZILLION'S MEMBER GATHERING (Kan Daw Gyi)
January 2011 edited February 2011 in Tech News
နည်းပညာဖိုရမ် တစ်ခုဖြစ်သော MYSTERY ZILLION (www.mysteryzillion.org (http://www.mysteryzillion.org/)
) မှ Member အဟောင်းနှင့် အသစ်များ ပိုမို ရင်းနှီးစေရန် ရည်ရွယ်၍ Gathering လေး ပြုလုပ်ပါမည်။
Gathering လေးကို အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်းကျင်းပပါမည်။
Time:... ညနေခင်း3နာရီမှ4နာရီခွဲအထိ
Place:.. ကန်တော်ကြီး ချစ်သူများကျွန်း
Member အဟောင်းများ အသစ်များ အားလာရောက်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်။
Update News များထပ်တင်ပေးပါ့မယ်။
See You at real world ... :P
ချစ်သူများကျွန်းက ဘယ်နားမှာလဲမသိဘူးခင်ဗျ။ မနှစ်ကတုံးကတော့ ချစ်သူများကျွန်းရှာမတွေ ့တာနဲ ့ပြန်သွားရတယ်
ရည်းစား မရှိမှန်း သိသာတယ် . ချစ်သူများ ကျွန်းမသိဘူး တဲ့ . အဲ ကျွန်တော်လဲ မသိဘူး ဗျ .
ရည်းစားတော့ ရှိတယ် . အဲဒီကိုတော့ မသွားဘူး . တခြားကို သွားတယ် .
လူပျိုကြီး လမ်းစဉ်လိုက်နေတာ :P
company မှာ ဆိုရင်တော customer care service ကောင်းတယ် အခု MZ မှာတော့ member care service ကောင်းတယ်
ဆူးလေဘုရား တောင်ဘက်တည့်တည့် (၂)မိုင်လောက်လမ်းလျှောက်သွားလိုက်
ရွှေတိဂုံဘုရား ရောက်သွားရော အဲဒိတော့ ရွှေတိဂုံဘုရားမြောက်ဘက်တည့်တည့်
မိုင် (၄၀၀) လောက်ကားစီးလာခဲ့
မန္တလေး ကိုရောက်ရော အဲဒိတော့ ၇၈ လမ်းတည့်တည့်ကြီးဝင်လာခဲ့
၃၄ လမ်းရောက်ရင် ဘယ်ဘက်ကိုချိူး ရတနာပုံဒိုင်းမွန်းပလာဇာ ရှေ့ကလမ်းထဲဝင်လိုက်ဗျာ
အဲဒိမှာ ကိုသျှန်ဝေ အိမ်ကဘယ်ဟာလဲလို့မေးလိုက်ဗျာ
ကျနော်ကိုတွေ့လိမ့်မယ် အဲကျတော့မှ ကျနော်က အကိုကို ရန်ကုန်မြေပုံပြပီး ချစ်သူများကျွန်းကို
လမ်းညွှန်ပေးမယ်ဗျာ အဆင်ပြေတယ်ဟုတ် (နားများရှုပ်သွားသလားခင်ဗျ) :cool:
တွေ့ဆုံပွဲမှာ MZ မန်ဘာအားလုံးအဆင်ပြေပါစေဗျာ
Shanwai wrote: »
မူးသွားပီ။ MZ ပွဲတော့ လာဖြစ်အောင်လာအုံးမယ်... မောင်မောရစ်ရေ ... ငါ့ခေါ်ဟ
btw, map has been fixed because my direction was wrong :P
ရန်ကုန်ရောက်ရင် ဆူးလေပတ်ချာလည်ကလွဲလို့ ဘယ်မှတွားတတ်ဝူးဂျ
မန်းလေးမှာလဲ ချစ်သူများကျွန်း(အသဲကွဲကျွန်း) ဆိုတာရှိတယ်
ကျနော့်အနေနဲ့ အကြံပေးရရင် ... အဟမ်း ...
ရန်ကုန်ချစ်သူများကျွန်းမှာလုပ်မဲ့အစား ... ငွေဆောင်ချစ်သူများကျွန်းမှာလုပ်ရင် အလွန်လျော်ကန် သင့်မြတ်မယ်လို့ ထင်ကြောင်းပါ ....
(Sponsor ကိုတော့ Singapore ရောက် MZ Admin/Mod များမှ ပေးရန်ဖြစ်ကြောင်း .... :P
ချစ်သူများကျွန်းက ကန်တော်ကြီး မင်္ဂလာစျေးဘက်အပေါက်က ၀င်ရင် နီးပါတယ်...၀င်၀င်ချင်း ၀င်ကြေးပေးပြီး ညာဘက်ခြမ်းကိုကြည့်... :P
Hehee.. I think Bro Alex is right.
ချစ်သူရှာပေးမယ်ဆိုရင် လာခဲ့ပါမယ်... xP
ချစ်သူရှိတဲ့လူများကျတော့ မြေပုံပါ ထုတ်ပြလိုက်တာပဲ.. :P
ဟုတ် လိပ်စာ မြေပုံကို ကိုexiter ဆီ ဆွဲပေးဖို့ ပြောထးပါတယ်။
မင်္ဂလာစျေး ဘက်ကတက်လာပြီးတော့ ကန်တော်ကြီးဝင်တဲ့နေရာမှာ ဝင်ကြေးပေးပြီးတော့ သူ့လမ်းအတိုင်း ညာဖက် ချိုးလိုက်ပါ။ပထမဦးဆုံးတွေ့မယ့် ကျွန်းပါပဲ။ တံတားတစ်စင်းရှိမယ်။ ဘေးနားမှာ ရေတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တော့ လူမစုံသေးခင်အထိ တံတားပေါ်မှာစောင့်ပါမယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
member အသစ်စက်စက်တွေကိုလာလို ့ရလားဟင် .. ဘာတွေလုပ်မှာလဲ ..
အသစ်စက်စက်တွေရော အဟောင်းအမြင်းကြီးတွေပါလာလို ့ရပါတယ်
ကို Tsuna lade ကျွန်တော် သိတယ် ဗျ တူူတူသွားရအောင်လေ....ဒီလိုနေရာ ကို ကျွန်တော့ အားကိုးစမ်းပါ....အဲ့လို နေရာနဲ့ ပက်သက် ရင် ကျွန်တော် က စွမ်းအားပြည့်ပညာရှင် ပါဗျ...ဟာ...ဟာ...နောက်တာနော်...
အင်း ကောင်းသဗျ လာခဲ့မယ်။
:biggrin: :rolleyes: ဘာမုန့်ကျွေးမှာပါလဲ။ နောက်တာပါ။ ကျွန်တော်လာကြည့်ချင်ပါတယ်။
၃နာရီ၁၅ကျော်လောက်မှ mict ကနေလာလို့ရမယ်ထင်တယ်။
နောက်ကျပီး ဘယ်သူ့မှ ရှာမတွေ့တာဖြစ်ဖြစ် အဲဒီနေရာရှာမတွေ့ရင်ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာတုန်း။
ကျွန်တော်လည်းလာချင်ပါတယ်။ ဟေ့ကောင် လိပ် မင်းနဲ့ငါနဲ့ချိန်းပြီးသွားရအောင်....
လာတော့လာခဲ့မယ် .. ဘယ်သူနဲ ့မှလဲမသိဘူး သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပါခေါ်လာမယ်နော် .. MZ member တော့မဟုတ်ဘူး .. ရတယ်မလား ..
see you guys tomorrow !!!!
အာ! ကိုကြီးကလည်း မလုပ်ပါနဲ့အဲဒီနေရာက ကျောက်ချွန်းတွေ အင်မတန်ပေါတယ် ကြားလယ် ။ ပုန်းလို ့ကောင်း၀ူး ခွိခွိ :P
ချစ်သူများကျွန်း... ကိုတော့ သောပန်းသိပါတယ်။ ချစ်သူများကျွန်းကို မသိတဲ့ MZ က ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေ အဆင်ပြေအောင် သိသလောက်လေးနဲ့ လမ်းညွှန်ပေးပါ့မယ်နော်။
မျှော်စင်ကျွန်း ကလေးကစားကွင်းဖက် ဂိတ်ပေါက် ဖက်ကနေဝင်ပါ။
ချစ်သူများကျွန်းက အခု သောပန်းပြောတဲ့ ဂိတ်ဖက်ကဝင်လာရင်တော့ မိမိရဲ့ ညာဖက်မှာ ရှိမှာပါ။( ဂိတ်ဝက ဝင်လာကတည်းကနေ အဲဒီကျွန်းကို လှမ်းမြင်နေရပါတယ်။ ဂိတ်ဝက ဝင်လာဝင်လာချင်း ရေပြင်ရှိတဲ့ ညာဖက်ကိုသာ လှည့်ကြည့်လိုက်ပါ။ ချစ်သူများကျွန်းကို တွေ့ရပါမယ်)
ရှိုးပွဲလုပ်တဲ့နေရာ ဖက်ကို သွားတဲ့လမ်းမအတိုင်း လျှောက်လာပါ။
ကရဝိတ်ဖက်ကိုသွားတဲ့လမ်းရယ် ရှိုးပွဲလုပ်တဲ့ မျှော်စင်ကျွန်းကိုသွားတဲ့လမ်းရယ်ဆုံတဲ့ လမ်းဆုံမရောက်ခင်လေးမှာ ချစ်သူများကျွန်းကို ဝင်ရမယ့် တံတားကလေး သေးသေးလေးတစ်စင်းရှိပါတယ်။
တံတားက စားသောက်ဆိုင် နှစ်ဆိုင်ရဲ့ကြားကို ရောက်နေတာမို့ နည်းနည်းဂရုစိုက်ပြီးရှာကြည့်ပါ။
ဂိတ်ဝကဝင်လာရင် စားသောက်ဆိုင် ခြောက်ဆိုင်မြောက်လောက်မှာ အဲဒီတံတားရှိမယ်ထင်ပါတယ်။( ဒါတော့ သိပ်မသေချာဖူး )
Nice to meet with you guys !!!! Thanks to all ...
ပွဲပြီးပြီ ရင် ရိုက်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံလေးတွေ ရှဲကြပါအုံး . . .
ကျွန်တော် MZ မှာ အဖွဲ့၀င် ဖြစ်တာသာ ကြတာတာ . ဘယ်သူနဲ့ မှ ရေရေရာရာ မမြင်ဘူးမသိဘူး ဘူး ဗျ .
တီလေး တောင် သားသမက် လို ပတ်သတ်နေလို့ သိတာ . ( အဟိအဟိ . ငါ့ ကို နာရင်းအုပ်တော့မှာပဲ )
ဘယ်သူ က ဘယ်လို ချောတာ . ဘယ်သူ က ဘယ်လို ခန့်တာ ဆိုတာသိရတော့ လမ်းတွေ့ ပိုက်ဆံချေးလို့ ရတာပေါ့ . .
LOL~ တီလေး သမက်က ကျွန်တော်ပါဗျ။ အခုမှ အစစ်ပေါ်လာတာကိုး။ ပုံတွေကို တင်ဖို့ ကိုexiter ကိုတာဝန်ပေးထားကြောင်းပါခင်ဗျား။